၂၀၁၈-ခုနှစ်အတွက် မြန်မာလအလိုက် တစ်နှစ်စာဟောစာတမ်း - Myanmarload
၂၀၁၈-ခုနှစ်အတွက် မြန်မာလအလိုက် တစ်နှစ်စာဟောစာတမ်း
လွန်ခဲ့သော ၁၀ လ က 16:51 December 07, 2017
တန်ခူးလတွင်မွေးဖွားသူများသည်ဤနှစ်တွင်ရှေ့ပိုင်း(၆)လတွင်လုပ်ငန်းခွင်တွင်အကြံအစည်းသစ်များ ဆောင်ရွက်ရမည့်နှစ်ဖြစ်သည်။ပြည်တွင်းပြည်ပ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ခြင်း၊ကွန်ပျူတာနှင့်တီတွင်ပညာများဆောင်ရွက်ခြင်းကောင်း၏။ အသေးစားချေးငွေးလုပ်ငန်း၊ အစုရှယ်ယာဝင်ခြင်း၊ဘဏ်လုပ်ငန်းများကောင်းကျိုးပေးမည်။မိမိလက်အောက်ငယ်သားနှင့်တပည့်များအားအထောက်ပ့ံပေးရခြင်း၊လူမူရေးနှင့်ဘာသာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးရခြင်း၊အများသဘောတူညီမှုကြောင့် ကုသိုလ်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရမည်။
စာချုပ်စာတမ်း၊ငွေကြေးကိစ္စများလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းဂရုစိုက်ရမည်။ စီးပွားရေးတွင်ရှေ့ပိုင်းတွင်အဆင်ပြေသလိုရှိပြီးနောက်ပိုင်းတွင်အခက်ကြုံမည်။ယခုနှစ်တွင်ဝါဆိုလ၊သီတင်းကျွတ်လ၊ပြာသိုလများတွင် မည်သည့်ကိစ္စမဆိုဆောင်ရွက်ရာတွင် အောင်မြင်မှုများရရှိမည်၊ပျိုရွယ်သူများစေ့စပ်ကြောင်းလမ်းခြင်းမင်္ဂလာနှင့်
အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စရပ်များ ပေါ်ပေါက်မည်။ရည်စားရှိသူများကာလကြာသည့်အ ခါမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ပြောင်းလဲမှုများကြံုရကိန်းရှိသည်။အိမ်ထောင်ရှင်များ စိတ်သဘောထား မတိုက်ဆိုင်ခြင်းကြောင့် အဆင်မပြေမှုများခဏခဏဖြစ်မည်၊ ဉာဏဆိုင်ရာပညာရပ်းများတီတွင်ဆန်းသစ်ပညာရပ်များသင်ယူသင့်သည်။သို့သော်ပညာရေးတွင် ခက်ခဲစွာသင်ယူရမည်။ ကျန်းမာရေးတွင် အာရုံကြောအားနည်းခြင်း ၊ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ကိုယ်ခန္ဓာညာဘက်ခြမ်းရောဂါဝင်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်းများဖြစ်တတ်သည်။
ယတြာ➖မိမိမွေးနေ့တွင် သစ္စာပန်း၊ကံကော်ညွန့်(၉)ညွန့်လှူပေးပါ။ဖန်ခွက်ဖြင့်ရေတော်(၅)ခွက်လှူပေးပါ။ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စယခုနှစ်တွင်ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် အရှေ့အရပ်မျက်နှာမူ၍ မေတ္တာသုတ်(၃)ခေါက်ရွတ်ဆိုပြီးခရီးသွားခြင်း၊ အနီရောင်၊အဖြူရောင်၊အစိမ်းရောင် အဝတ်အထည်များဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိုအရောင်များကိုအဆောင်အဖြစ်အသုံးဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။စိုးမိုးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများ➖(ပ၊ဖ၊စ၊မ၊ည)၊(၃၊၀၊၇၊၂)
ကဆုန်လတွင်မွေးဖွားသူများသည် ဤနှစ်တွင်အခက်အခဲမည်မျှရှိစေဆောင်ရွက်စရာများရှေ့တိုး၍ဆောင်ရွက်ရမည့်နှစ်ဖြစ်သည်။အကြံစည် သစ်များဆောင်ရွက်ရမည်။နယုန်လ၊ဝါခေါင်လများတွင် လုပ်ငန်းခွင်တွင်သတိတရားရှေ့ရှု၍ဆောင်ရွက်ရမည်။ စီးပွားရေးတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်လိုစိတ်များပေါ်ပေါက်နေတတ်သည်။ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ငွေကြေးချေးငှားခြင်း၊ အစုရှယ်ယာဝင်ခြင်းများကောင်းကျိုးပေးမည်။ မမျှော်လင့်ဘဲငွေကြေးများဝင်တတ်သည်။ညီအကို မောင်နှမနှင့် ဆွေမျိုးများ နှောက်ယှက်မှုကြောင့် မိမိလုပ်ငန်းခွင်အကျိုးအမြတ်များပျက်စီးတတ်သည်။ အိမ်၊ခြံ၊မြေ၊ပြုပြင်မှုများကြံုမည်။ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးတိုခရီးရှည်များ သွားရကိန်းရှိသည်။ပျိုရွယ်သူများမေတ္တာရေးကံကောင်းပြီး မိမိရည်မှန်းထားသောချစ်သူများနှင့်မေတ္တာရေးများမည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ အိမ်တွင်းရေးပြဿနာများအနှောက်အယှက်များဝင်လာတတ်သည်။အပျော်အပါးလိုက်စားမှုကြောင် ့လူမှုရေးပြဿနာများဖြေရှင်းရတတ်သည်။မိမိကြိုးစားသောပညာရေးတွင် ဝီရိယစိုက်ရမည့်နှစ်ဖြစ်သည်။ဆွေမျိုးသားချင်း ကူညီပံ့ပို့မှုများရရှိမည်။လုပ်ငန်းခွင်တွင် စာမေးပွဲများဖြေဆိုခွင့် အခွင့်လှမ်းကောင်များရရှိမည်။ကျန်းမာရေးတွင် ဗိုက်နာခြင်းသွေးတိုးရောဂါ၊အဖျားအနာ၊ အပူရောဂါများဖြစ်တတ်သည်။
ယတြာ➖ရွှေပန်း၊ငွေပန်း၊လသာပန်းတို့ကိုမိမိမွေးနေ့တိုင်းဘုရားတွင်ပူဇော်ပေးပါ။ ဘုရားစင်တွင်ထီး၊တံခွန်၊ကုက္ကားနှင့်ယပ်တောင်လှူပေပါ။ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စယခုနှစ်တွင်ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက်ဂုဏ်တော်(၉)ခေါက်ရွတ်ဆိုပြီးခရီးသွားခြင်း၊ကြည်ပြာရောင်၊ဆင်စွယ်ရောင်၊ပန်းရောင်အဝတ်အထည်များ ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထိုအရောင်များကိုအဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။စိုးမိုးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများ➖(လ၊ဝ၊သ၊ဒ)၊(၅၊၄၊၈၊၁)
ဤနှစ်တွင် ကာလအတန်ကြာကျန့်ကြာနေသောလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြင့် အစစအရာရာကံကြမ္မာပွင့်လင်းလာမည်။အပြောင်းအလဲကိုလက်ခံပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ကိန်းကြံုမည်။ ဆေးဝါးရောင်ဝယ်ခြင်း၊စက်သုံးဆီရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ရေသန့်လုပ်ငန်း၊မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊အိမ်၊ခြံမြေအကျိုးဆောင်ခြင်းများကောင်း၏။မမျှော်လင့်ဘဲ ရာထူးတက်ခြင်း၊အကြွးပေးဖြစ်ခြင်း၊ နိုင်ငံတော်မှဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးချီးမြှင့်ခြင်းခံရတတ်သည်။အဆိပ်ရှိသောသတ္တဝါများရန်မူခြင်းခံရတတ်သည်။ကျောက်မျက်ရတနာရွှေထည်၊ငွေလထည်ပစ္စည်းများဝင်လာတတ်သည်။ ငွေကြေးကိစ္စများအတွက် မကြာခဏအမုန်းခံ၍ပြောဆိုပေးရတတ်သည်။စာချုပ်စာတမ်း၊ငွေကြေးကိစ္စအာမခံခြင်း၊လွှဲပြောင်းပေးခြင်းများ သတိထားရမည့်နှစ်ဖြစ်သည်။ အချစ်ရေးကိစ္စရပ်များ၌ အလွယ်တကူဆုံးဖြတ်ခြင်းမလုပ်သင့်ပါ။
ပျိုရွယ်သူများ ချစ်သူအပေါ်သံသယဝင်လာမည်။အိမ်ထောင်ရှင်များသားသမီးရတနာထွန်းကားပြီး ဂုဏ်သတင်းကျော်ဇောမည်။ပညာရေးတွင်ဆရာကောင်းများနှင့်တွေ့ဆုံပြီး မိမိရည်မှန်းထားသောပန်းတိုင်ကိုဆွတ်ခူးရမည်။အပေါင်းအသင်းအနှောင့်အယှက်နှင့်အပျော်အပါးလိုက်စားမှုကိုရှောင်သင့်သည်။ကျန်းမာရေးတွင် ငှက်ဖျားရောဂါ၊သွားနှင့်ပတ်သက်သောရောဂါ၊အဆုတ်နှင့်ဆိုင်သောရောဂါများခံစားရ၍မကြာခဏကျန်းမာရေးညံ့မည်။ယခုနှစ်တွင်ရောဂါဖြစ်လျှင် မပေါ့ဆသင့်သောနှစ်ဖြစ်သည်။ယတြာ➖မိမိမွေးနေ့တွင်အုန်းညွန့်၊ရွက်လှညွန့်၊ကြံညွန့်တို့ကိုပေါင်းပြီးကြေးပန်းအိုးဖြင့် ဘုရားတွင်ပူဇော်ပေးပါ။ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စယခုနှစ်တွင်ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စများအဆင်ပြေရန်အတွက် သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာ(၃)ခေါက််ရွတ်ဆိုပြီး ခရီးသွားခြင်း၊အပြာရောင်၊ကြက်သွေးရောင်၊အဖြူရောင်အဝတ်အထည်များ ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထိုအရောင်များကိုအဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။စိုးမိုးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများ➖(စ၊ဆ၊တ၊ထ)၊(၆၊၄၊၂၊၇)
အိမ်၊ခြံ၊မြေ၊အဆောက်အဦးများဝင်လာမည်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသော လုပ်ငန်းများမှ အကျိုးအမြတ်ရခြင်း အမျိုးသမီးများအတွက် ဖက်ရှင်ဆိုင်ဖွင့်ခြင်း ၊အလှကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဖန်စီလုပ်ငန်းများလုပ်ခြင်း ၊ဖုန်းအပိုပစ္စည်းများနှင့်စက်သုံးဆီရောင်းဝယ်ခြင်းများမ အကျိုးအမြတ်ရရှိမည့်နှစ်ဖြစ်သည်။ယခုနှစ်တွင်ဝါခေါင်လ၊သီတင်းကျွတ်လ၊ပြာသိုလများတွင်မည်သည့်ကိစ္စမဆိုဆောင်ရွက်ရာတွင်အောင်မြင်မှုများရရှိမည်။ယာဉ်ရထားစီးခြင်း မောင်းနှင်းခြင်းများသတိထားရမည်။အမွေအနှစ်ရခြင်း၊ရာထူးတတ်ခြင်း အထက်အကြီးအကဲ၏ချီးမွမ်းခြင်းခံရမည်။မိဘအကြီးအကဲများ၏ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှေက်ပေးရတတ်သည်။ပျိုရွယ်သူများတစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး ယုံကြည်မှုအားနည်းတတ်သည်။စွပ်စွဲမှုအမျိုးမျိုး ခံစားရကိန်းကြံုမည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ သီခံခြင်းများဖြင့်သာယာသောအိမ်ထောင်မှုကိုဖန်တီးရ မည့်နှစ်ဖြစ်သည်။
ပညာရေးတွင်စနစ်တကျသင်ယူသင့်သည်။ ဉာဏ်၊ဝရီယစိုက်ထုပ်ပြီး လုပ်သင့်သည်။ကျန်းမာရေးတွင် အစားအသောက်မှားယွင်းမှု ကြောင့်ရောဂါဝေဒနာဝင်တတ်သည်။နှလုံးရောဂါခံစားရတတ်သည်။ယတြာ➖မိမိမွေးနေ့တွင်တန်ခိုးကြီးဘုရားတွင်ဆီးမီးသက်စေ့ကပ်ပူဇော် ပေးပါ။ဇွန်ပန်း၊သစ္စာပန်းနှင့်အဖြူရောင်ဂန္ဓမာပန်းများပူဇော်ပေးပါ။ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စယခုနှစ်တွင်ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စများအဆင်ပြေရန်အတွက် ဘုရားတွင် (ဘဂဝါ) ဂုဏ်တော်ဖြင့် (၉)ပတ်ပုတီးစိတ်ပြီးခရီးသွားခြင်း ၊ဖက်ဖူးရောင်၊အညိုရောင်၊အဝါရောင် အဝတ်အထည်များဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထိုအရောင်များကိုအဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။စိုးမိုးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများ➖(တ၊ထ၊က၊ခ)၊(၆၊၂၊၉၊၀)
ယတြာ➖မိမိမွေးနေ့တွင်အဝါရောင်ဂန္မမာပန်း၊မေမြို့ပန်း၊သစ္စပန်းတို့ကိုပေါင့းထည့်ပြီး အရှေ့အရပ်ရှိဘုရားတွင် ပူဇော်ပေးပါ။ ဇရပ်၊ကျောင်းများတွင်တံမြက်စည်း လှူပေးပါ။ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စများယခုနှစ်တွင ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် ဘုရားတွင်(ဗုဒ္ဓေါဘဂဝါ)ဂုဏ်တော်ဖြင့်ပုတီး(၅)ပတ်စိတ်ပြီးခရီးသွားခြင်း၊အဝါရောင်၊အနီရောင်၊ဆင်စွယ်ရောင်အဝတ်အထည်များ ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိုအရောင်များကိုအဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဤနှစ်တွင် ပေါ်ပေါက်လာသော စတ်ကူးများကို လက်တွေ့အောင်မြင်မှုရသောနှစ်ဖြစ်သည်။လုပ်ငန်းအလုပ်နေရာသစ်တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ပါက အောင်မြင်မှုရမည်။နာမည် ဘုန်းကံတိုးတက်ပြီးနေရာအနှံ့သွားကိန်းရှိသည်။လုပ်ငန်း ခွင်တွင်မိတ်ဆွေအသစ်များနှင့်ဆက်ဆံရမည်။စိတ်လောကြီးပြီးတစ်ပါးသူ၏ ငွေကြေးများကိုလုပ်ငန်းခွင်တွင်သုံးစွဲခြင်းများ ရှောင်သင့်သည်။ဇိမ်ခံပစ္စည်းများဝင်မည်။ယခုနှစ်တွင် ဝါဆိုလ။သီတင်းကျွတ်လ၊ပြာသိုလများတွင် မည်သည့်ကိစ္စမဆိုဆောင်ရွက်ရာတွငသတိထားရှိရမည်။
ဆောင်ရွက်ရမည်။ပျိုရွယ်သူများတစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး ယုံကြည်မှုအားနည်းတတ်သည်။အိမ်ထောင်ရှင်များ ရံဖန်ရံခါစကားငြင်းဆိုမှုများပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ပေါ်လာမည်။ပညာရေးတွင် နှောင့်နှေးတတ်သည်။ပညာသင်စရိတ်အတွက်ခက်ခဲလာတတ်သည်။ကျန်းမာရေးတွင်နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းခြင်း ၊ထုံနာကျင်နာရောဂါ၊လေနှင့်အူလမ်းကြောင်းရောဂါများဖြစ်ပွားတတ်သည်။ကျွမ်းကျင်သောဆရာဝန်များနှင့်ပြသ၍ကုသလျှင်ရောဂါပျောက်ကင်းတတ်သည်။
ယတြာ➖မိမိ၏မွေးနေ့တွင် ငွေရောင်ပန်းအိုးဖြင့် ရွက်လှညွန့်၊စပယ်ညွန့်၊ပိထောက်ညွန့်၊သက်ကယ်ညွန့် တို့ကိုပေါင်းပြီးပူဇော်ပေးပါ။ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စများယခုနှစ်တွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် ဘုရားတွင်(မနုတ္တရောပုရိတ ဓမ္မာသရတိ)ဂုဏ်တော်ဖြင့် ပုတီး(၅)ပတ်စိတ်ပြီးခရီးသွားခြင်း၊ အဖြူရောင် ၊လိမ္မော်ရောင်နှင့်နို့နှစ်ရောင် အဝတ်အထည်မျာဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိုအရောင်များကို အဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။စိုးမိုးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများ (ပ၊ဗ၊တ၊ဓ).(၇.၆.၄.၀)
ဤနှစ်တွင်လုပ်ငန်းခွင်ကို တိုးချဲ့ရန်ဆန္ဒရှိသောလည်းသတိတရားဖြင့်လုပ်ကိုင်သင့်သည်။အကောင်းအဆိုး ဒွန်တွဲလျက်ရှိသည်။လေကြောင်း၊ရေကြောင်းနှင့်ရေထွက်ပစ္စည်းများရောင်းဝယ်ခြင်း များကောင်း၏။ယခုနှစ်တွင် ဝါဆိုလ၊တန်ဆောင်မုန်းလ၊ပြာသိုလများတွင် မည်သည့်ကိစ္စမဆိုဆောင်ရွက်ရာတွင်သတိထားရှိရမည်။ စက်ပစ္စည်းများနှင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတတ်သည်။သူတစ်ပါးကိုယုံကြည်မှုမလွန်ကဲသင့်ပါ။ငွေကြေးနှင့်အဖိုးတန်ပစ္စည်းများကျပျောက်တတ်သည်။ရည်းစားအပေါ်အချစ်ကြီး၍ မကြာခဏ ဒေါသထွက်တတ်သည်။အသက် ၂၂နှစ်မှ၂၆နှစ်ကြားရောက်ရှိနေသူများ အချစ်ရေးပြဿနာများဖြစ်တတ်သည်။မိမိထက်အသက်ဝါကြီးသောသူများနှင့် အိမ်ထောင်ကျတတ်သည်။အိမ်ထောင်ရှင်များတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးမယုံကြည်စရာများဖြစ်မည်။သူတစ်ပါးအတွက်ကြောင့်မိမိဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းတတ်သည်။ပညာရေးတွင်ရည်မှန်းထားသလောက်ရနိုင်မည်။နိုင်ငံခြားသို့ပညာသင်သွားရကိန်းကြံုမည်။ကျန်းမာရေးတွင်အကြောအဆစ်ရောဂါ၊လေးဖက်နာ၊ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောရောဂါများ၊သွေးအားနည်းခြင်းများဖြစ်တတ်သည်။ခရီးတွင်ကျန်းမာရေးဖောက်ပြန်မှုများနှင့်ကြံုရတတ်သည်။အမျိုးသမီးများမီးယပ်ရောဂါဆိုင်ရာများ ဖြစ်တတ်သည်။
ယတြာ➖မိမိမွေးနေ့တွင်ဆီမီးသက်စေ့၊ပန်းသက်စေ့၊သစ်သီးသက်စေ့လှူခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ပါ။သံဃာတော်များနှင့်အဖိုးအဘွား၊အကြီးအကဲပုဂ္ဂိုလ်များကို ငချိပ်ပေါင်း၊ ဘယကြော်၊ ထိုးမုန့်၊လမုန့်နှင့်အုန်းထမင်းလှူပေးပါ။ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စများယခုနှစ်တွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် ဘုရားတွင်(ဝိဇ္ဇာစရဏ သမ္ဗန္နော)ဂုဏ်တော်ဖြင့်ပုတီး(၅)ပတ်စိတ်ပြီး ခရီးသွားခြင်း၊ ဆင်စွယ်ရောင်၊အနီရောင်၊အပြာရောင် အဝတ်ထည်များဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိုအရောင်များကို အဆောင်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။စိုးမိုးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများ (ရ၊ယ၊လ၊ဝ).(၅.၉.၁.၃)
ယတြာ➖မိမိမွေးနေ့တွင် ပုတီးစိပ်၊အဓိဌာန်ဝင်ခြင်းများအထူးပြုလုပ်၍ဆွမ်းနှင့်ဆွမ်းဆန်စိမ်း၊ဆေးဝါးထုပ်များလှူခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ပေးပါ။ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စများယခုနှစ်တွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် ဘုရားတွင်(အရဟံ)ဂုဏ်တော်ဖြင့်ပုတီး(၉)ပတ်စိတ်ပြီးခရီးသွားခြင်း၊ဖက်ဖူးရောင်၊ပန်းရောင်၊ကြည်ပြာရောင်အဝတ်အထည်များဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိုအရောင်များကိုအဆောင်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။စိုးမိုးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများ (က၊ခ၊ဂ၊စ).(၄.၉.၆.၈)
ဤနှစ်တွင် စိတ်ကူးသစ်များကို လက်တွေ့အကောင်ထည်ဖော်နိုင်မည့်နှစ်ဖြစ်သည်။လုပ်ငန်းခွင်တွင်ယှဉ်ပြိုင်မှုများနှင့်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရတတ်သည်။လူမျိုးကွဲ၊ဘာသာခြားများနှင့်ဆက်ဆံရေးအကျိုးပေးခြင်းခံရမည်။လုပ်ငန်းကိုတစ်ဦးတည်းဆောင်ရွက်မှသာအကျိုးထူးမည်။ဆွေမျိုးများနှင့်ဝေးကွာနေသောအပေါင်းအသင်းများ ပြန်လည်ဆုံဆည်းရမည်။မိမိပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများငှားရမ်းခြင်းကိစ္စများ သတိထားဆောင်ရွက်ပါ။တိုက်တာအဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ခြင်းအမွေအနှစ်ရရှိတတ်သည်။ယခုနှစ်တွင် ကဆုန်လ၊တန်ဆောင်မုန်းလ၊ပြာသိုလများတွင်မည်သည့်ကိစ္စမဆိုဆောင်ရွက်ရာတွင်သတိထားရှိရမည်။မိဘအကြီးအကဲများအတွက်ကျန်းမာရေးပြုစုေစောင့်ရှောက်ရမည်။အသက်၁၈နှစ်မှ ၂၀နှစ်ကြား၊အသက်၂၃မှနှစ်မှ၂၆နှစ်ကြားရှောက်ရှိနေသူများအချစ်ရေးပြဿနာများ ဖြစ်တတ်သည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များမိသားစုအနှောင့်အယှက်ပေါ်လာတတ်သည်။ မီးဘေးအန္တရာယ်ဂရုစိုက်ပေးသင့်သည်။တစ်ပါးသူ၏ပြဿနာများဖြေရှင်းရတတ်သည်။အပေါင်းအသင်းကြောင့်ပညာရေးထိခိုက်တတ်သည်။ ရပ်ဝေးသိုသွားယောက်ပညာရှာဖွေနေသူများအခြေနေကောင်းများရရှိလာမည်။သို့သော်ကျန်းမာရေးအနှေင့်အယှက်ဝင်လာတတ်သည်။ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ နှလုံးရောဂါ၊ထုံနာကျင်နာရောဂါများ၊ကိုယ်ကိုက်ခဲခြင်းသွားနှင့်မျက်စိရောဂါခံစားရတတ်သည်။
ယတြာ➖မိမိမွေးနေ့တွင်ကြေးပန်းအိုးဖြင့်နှင်းဆီ၊သပြေ၊မာလာကာညွန့်တို့ကိုပေါင်းထည့်ပြီး ဘုရားတွင်ပူဇော်ပေးပါ။ယပ်(၈)ချောင်း၊ရွှေထီး(၁၁)လက်လှူပေးပါ။ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စများယခုနှစ်တွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် ဘုရားတွင်(သုဂတော လောကဝိဒူ)ဂုဏ်တော်ဖြင့်ပုတီး(၅)ပတ်စိတ်ပေးပါ၊၊
ဤနှစ်တွင်စီးပွားရေးတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ခြင်းကို ဦးစားပေးရမည့်နှစ်ဖြစ်သည်။အောင်မှုများရရှိမည်။မိမိသြဇာတန်းခိုးအာဏာများထက်မြက်ပေါ်လွက်မှုရှိလာပေမည်။အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်ခြင်း၊တိုက်ခန်းများရောင်ဝယ်ခြင်း၊ငှားရန်းခြင်း၊ဖန်စီနှင့်ဖက်ရှင်ဆိုင်ဖွင့်ခြင်း၊ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများရောင်းဝယ်ခြင်းကောင်းမည်။အတိုက်အခိုက်အမျိုးမျိုးကြားမှအောင်မြင်မူကိုရရှိနိုင်မည်။တပည့်လက်အောက်ငယ်သားနှင့်အစုရှယ်ယာလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်မှုတွင်သတိထားပြီးပြုလုပ်သင့်သည်။ယခုနှစ်တွင်နယုန်လ၊သီတင်းကျွတ်လတပို့တွဲလများတွင် မည်သည့်ကိစ္စမဆိုဆောင်ရွက်ရာတွင် အောင်မြင်မှုများရရှိမည်။ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားကိန်းများကြံုမည်။ငွေကြေးကိစ္စအဆင်ပြေမည်။အသက်(၁၅)နှစ်မှ(၁၇)နှစ်ကြား၊အသက်(၂၀)နှစ်မှ(၂၃)နှစ်ကြားရှောက်ရှိနေသူများအချစ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍အဖုအထစ်များတွေ့ရတတ်သည်။အိမ်ထောင်ရှင်များတစ်ပါးသူအတွက်မိမိဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းတတ်သည်။အနုပညာနှင့်ဖန်တီးမှုများကိုထိရောက်စွာဝေဖန်ခံရမည်။ပညာရေးတွင်ရှေ့ပိုင်းကြိုးစားမှုအားကောင်း၍ထူးချွန်ပြီး ကံ၊ဉာဏ်၊ဝီရိယိုက်ထုပ်ရမည်။ကျန်းမာရေးအညံ့များဝင်လာခြင်းဦးခေါင်းနှင့်အရိုးအဆစ်ရောဂါများ၊လေရောဂါ၊အဆုတ်အအေးမိခြင်းရောဂါဖြစ်တတ်သည်။
ယတြာ➖မိမိမွေးနေ့တွင်ကြေးဖလားဖြင့်ရေတော်(၅)ခွက်နှင့်ယို(၅)မျိုးလှူပေးပါ။တန်ခိုးကြီးဘုရားများတွင်သင်္ကန်းကပ်လှူခြင်း၊နှင်းဆီပန်း၊အုန်းညွန့်၊ကံကော်ညွန့်တိုကိုပေါင်ပြီး ပန်းအိုးတစ်အိုးဘုရားတွင်ပူဇော်ပေးရမည်။ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စများယခုနှစ်တွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် ဘုရားတွင်(သမ္မာသမ္ဗဒ္ဓေါ)ဂုဏ်တော်ဖြင့်ပုတီး(၇)ပတ်စိတ်ပြီးခရီးသွားခြင်း၊ အဖြူရောင် ၊ အဝါရောင်၊ကြက်သွေးရောင်အဝတ်ထည်များဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိုအရောင်များကို အဆောင်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။စိုးမိုးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများ (က၊စ၊ည၊င).(၁.၉.၂.၄)။
ဤနှစ်တွင် လုပ်ငန်းသစ်များနေရာပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်ရန်ဆန္ဒရှိခြင်း၊ဌာနပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ခရီးသွားလာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊အစားအသောက်လုပ်ငန်းများ၊တည်းခိုနားနေစရာလုပ်ငန်း၊ကွန်ပျူတာ၊ဖုန်းနှင့်စက်ပစ္စည်းများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ရောင်းဝယ်ခြင်း၊စက်သုံးဆီရောင်းချခြင်း၊ဥယျာဉ်ခြံစိုက်ပျိုးခြင်းများကောင်းမည်။အိမ်၊ခြံ၊မြေ၊တိုက်ခန်းသစ်များဝင်လာခြင်း၊အသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်းများရှိသည်။ယခုနှစ်တွင်တော်သလင်းလ၊နတ်တော်လ၊တပေါင်းလများတွင်မည်သည့်ကိစ္စမဆိုရာတွင်အောင်မြင်မှုများရရှိမည်။လုပ်ငန်းခွင်တွင်ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားပါက ဘဝတစ်ခုလုံးအတွက် နစ်နာဆုံးရှုံးခံရတတ်သည်။အချစ်ရေးတွင်တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးသဘောထားလွဲမှားမှုကြောင့် ဘဝအတွက်ဖူးစာရှင်နှင့်လွဲချောရတတ်သည်။အိမ်ထောင်ရေးအဆင်ပြေစရာများဖြစ်လာမည်။ သားသမီးများကြောင့်မိဘ၏ဘုန်းတန်ခိုးဂုဏ်သတင်းကျော်ဇောမည်။ပညာရေးတွင်လူမှုရေးရှုပ်ထွေးမှုကြောင့် နှောင့်နှေးတတ်သည်။ဤနှစ်တွင်ရောဂါဘယအမျိုးမျိုးနှိပ်စက်ခြင်းခံရမည်။ကျန်းမာရေးတွင်အနာရောဂါများ၊ရာသီဥတုကြောင့် အတွင်းကျိတ်နာဖြစ်တတ်သည်။ခွဲစိတ်ကုသမှုများခံယူခြင်းပေါ်ပေါက်လာတတ်သည်။
ယတြာ➖မိမိမွေးနေ့တွင်၊မေမြို့ပန်း၊ ပိတောက်ညွန့်၊ ဇီးညွန့်၊ရွက်လှညွန့်၊ကန်းဇွန်းညွန့်တို့ကိုပေါင်းပြီး ကြွေပန်းအိုးဖြင့် အရှေ့အရပ်ဘုရားတွင်ပူဇော်ပေးပါ။မိမိမွေးနေ့တွင်အဝါရောင်ပန်းများ၊မုန့်ထုပ်၊ကော်ဖီမစ်ထုပ်၊ခေါက်ဆွဲထုပ်များလှူဒန်းပေးပါ။ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စများယခုနှစ်တွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် ဘုရားတွင်(လောကဝိဒူ)ဂုဏ်တော်ဖြင့်ပုတီး(၇)ပတ်စိတ်ပြီးခရီးသွားခြင်း၊အနီရောင်၊အပြာရောင်၊ဆင်စွယ်ရောင်၊ အဖြူရောင် အဝတ်အထည်များဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိုအရောင်များကိုအဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။စိုးမိုးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများ (ယ၊ရ၊တ၊ဓ).(၂.၅.၉.၃.)။
ဤနှစ်တွင်ပြည်တွင်းပြည်ပကိစ္စရေးရာအဖြာဖြာဆောင်ရွက်ရန် အခွင့်အခါကောင်းကျရောက်သောနှစ်ဖြစ်သည်။စိတ်ကူးသစ်နှင့်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်အထူးခြားသောအကျိုးဆက်များဖြစ်ထွန်းလာမည်။ဖန်စီလုပ်ငန်း၊ဖက်ရှင်လုပ်ငန်း၊ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ခြင်းကောင်း၏။ယခုနှစ်တွင် ဝါဆိုလ၊ သီတင်းကျွတ်လ၊ပြာသိုလများတွင် မည်သည့်ကိစ္စမဆို အောင်မြင်မှုများရရှိမည်။အထူးသဖြင့်တစ်ပါးသူ၏ကြားခံဝင်ရောက်ပြောဆိုမှုများနှင့်မိသားစုတွင်ခေါင်းဆောင်လုပ်ခြင်းများ သတိထားရမည့်နှစ်ဖြစ်သည်။ အိမ်ယာ၊တိုက်ခန်း၊မြေယာခြံကွက်များရရှိတတ်သည်။လူမျိူးခွဲများနှင့်ဆက်ဆံလုပ်ကိုင်သောအလုပ်များကောင်းမည်။ မေတ္တာရေးတွင်အသေးစားပြဿနာများကို အကျယ်ချဲ့၍ပဋိပက္ခဖြစ်ကာ လမ်းခွဲရခြင်းကြံုရမည်။အိမ်ထောင်ရေးစိတ်သဘောထားကြီးကြီးထားသင့်သည်။မိမိအိမ်တွင်းရေးများနှင့်နှစ်ဖက်ဆွေမျိုးသားခြင်းများအတွက်ငွေကြေးနှင့်လူမှုရေး အပူသောကများဝင်လာတတ်သည်။နယ်ဝေးဆွေမျိုးများအိမ်သို့အလည်အပတ်သွားလာခြင်း၊မသွားလိုသောခရီးများလဲသွားရတတ်သည်။
စက်မှု၊လက်မှုပညာခေတ်နှင့် ညီသောပညာရပ်များ လေ့လာလိုက်စားခြင်းများအထူးကောင်းမွန်သည်။ကျန်းမာရေးတွင်၊အဖျားအနာ၊နှလုံး၊ဆီး၊ကျောက်ကပ်၊အင်္ဂါဇတ်အစရှိသောရောဂါဝေဒနာများခံစားရတတ်သည်။ယတြာ➖မိမိမွေးနေ့တွင် မေမြို့ပန်း၊အောင်သပြေ၊ကံကော်ပန်းနှင့်သစ္စာပန်းများကိုအရှေ့အရပ်ဘုရားတွင်လှူဒါန်းပေးပါ။ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စများယခုနှစ်တွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် ဘုရားတွင်(သတ္တဒေဝမနုဿာနံ)ဂုဏ်တော်ဖြင့်ပုတီး(၅)ပတ်စိတ်ပြီးခရီးသွားခြင်း၊ကြေးနီရောင်၊အဝါရောင်၊အစိမ်းနုရောင်အဝတ်အထည်များဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိုအရောင်များကိုအဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။စိုးမိုးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများ (သ၊ဟ၊စ၊ည).(၁.၆.၈.၃.)။
ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအားလုံး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာအောင်ကံကောင်းမှုများနှင့် အောင်မြင်သောနေ့ရက်များစွာကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။
source - yuyalay
Page generated in 0.0677 seconds with5database query and5memcached query.